Jasiiradaha Cayman waxay ku dhawaaqeen Qorshe dib loogu furayo Dalxiiska Dalxiiska Caalamiga ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Cayman Islands » Jasiiradaha Cayman waxay ku dhawaaqeen Qorshe dib loogu furayo Dalxiiska Dalxiiska Caalamiga ah
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Cayman Islands • saaciday inay • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qorshaha shanta waji ee soo celinta amniga dalxiiska ayaa ujeedkiisu yahay in la arko jasiiradaha Cayman oo si buuxda dib loogu furay Janaayo 2022.
Laga bilaabo horaantii Maarso 2020, Jasiiradaha Cayman waxay si deg deg ah oo wax ku ool ah ugu xireen xuduudahooda safarka caalamiga ah iyo gaadiidka dalxiiska si looga ilaaliyo safrayaasha iyo deganayaasha cudurka faafa adduunka.
Habka cusub ee shan-waji ee dib-u-furidda ayaa sii wadi doona ilaalinta dadka Caymaniyiinta ah, iyadoo sidoo kale si taxaddar leh loogu oggolaanayo booqdayaasha caalamiga ah inay ku raaxeystaan ​​Jasiiradaha Cayman markale.
Mar haddii uu dalku dhammeeyo dhammaan shanta weji isla markaana qiimeyn dhammaystiran laga helo Xukuumadda iyo saraakiisha caafimaadka, Jasiiradaha Cayman waxay u dabaaldegi doonaan Dib-u-Furitaankeedii weynaa.
Kuwii ku riyooday xeebo caafan oo cadaan ah, biyo turquoise ah, iyo waxyaabo qaali ah oo ka jira jasiiradaha Cayman ayaa dhowaan riyadoodii ka dhigi kara run: Cayman Islands ayaa ku dhawaaqday qorshayaal lagu bilaabayo soo dhoweynta dalxiisayaasha Grand Cayman, Cayman Brac, iyo Little Cayman iyada oo loo marayo qaab dib-u-furid weji ula kac ah.
“Laga soo bilaabo Maarso 2020, Jasiiradaha Cayman waxaa si ula kac ah looga hadlay dhammaan dadaalada lagu ilaalinayo dadkeenna iyo martideena; laga bilaabo imtixaan deg deg ah oo baahsan, maalgashi lagu sameeyo shaqaalaha Caymanka iyo hirgelinta istiraatiijiyad waji ah oo si nabadgelyo leh dib loogu furo xeebaheena booqdayaasha raaxo doonka ah, caafimaadka iyo badbaadada bulshadayadu waxay ahayd mid muhiimad gaar ah leh dhammaan go'aannada, ”ayuu yiri Wasiirka Dalxiiska iyo Gaadiidka, Mudane. Kenneth Bryan. “Asxaabteyda iyo aniga dowlada waxaan ku shaqeynay si hagar la’aan ah si aan uhormarino qaabkan wajiga leh ee udiyaar garowga furitaanka xuduudaheena socdaalayaasha caalamiga ah - waana ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in sugitaankii janno ay dhamaatay! Martidayadu way qadarin doonaan horumarka saameynta leh iyo kor u qaadista aan ku sameynay meeshii aan u socono - runti waxay cadeyneysaa in Cayman uu mudan yahay sugitaankiisa. ”
Laga bilaabo bilowga Maarso 2020, ee Cayman Islands si deg deg ah oo wax ku ool ah u xidhay xuduudihiisa safarka caalamiga ah iyo gaadiidka dalxiiska si looga ilaaliyo safarka iyo deggeneyaasha aafada adduunka oo ay ka soo ifbaxday dhibaatada iyada oo ah ilays rajo ah, ilaalinta qorrax soo baxa quruxda badan, dhunkashada saaxiibtinimo ee saaxiibtinimada leh, cunno heer caalami ah, iyo Caymankindness for sanadaha soo socda. Habka cusub ee shan-waji ee dib-u-furidda ayaa sii wadi doona ilaalinta dadka Caymaniyiinta, iyadoo sidoo kale si taxaddar leh loogu oggolaanayo booqdayaasha caalamiga ah inay ku raaxaystaan ​​qorraxda, ciidda, badda iyo nabadgelyada Cayman mar labaad.
Dowlada Cayman Islands (CIG) waxay si dhow ula shaqeysay maamulada caafimaadka, waaxda dowlada, iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si loo horumariyo qaabkan shan waji ah si loo xaqiijiyo khibrad amaan iyo caafimaad leh oo loogu talagalay kuwa ka shaqeeya warshadaha iyo dadka soo booqda ee doorta inay la kulmaan raaxeysiga in jasiiradda loo socdo lagu yaqaan adduunka oo dhan.